comme-un-pro.fr waxay ku hawlan tahay in ay mareegtan ku cusboonaato wakhtiga loogu talagalay. Haddii, si kastaba ha ahaatee, aad la kulanto dhibaato ama xog duugowday, waan ku mahad naqaynaa haddii aad na soo ogeysiiso. Fadlan sheeg meesha aad ka akhriday macluumaadka khaldan ee mareegaha. Waxaan u eegi doonaa arrintan sida ugu dhakhsaha badan. Fadlan jawaabtaada u soo dir email in: tranquillus.france@comme-un-pro.fr.
Annagu mas'uul kama nihin khasaraha ka dhasha khaladaadka ama cilladaha, ama khasaaraha ka dhasha dhibaatooyinka ay keeneen ama ay ku abtirsadaan ku faafinta macluumaadka internetka, sida carqaladeynta ama hakadka. Markaad isticmaaleyso foomamka shabakadda, waxaan sameynaa dadaal kasta si aan u yareysano tirada meelaha laga rabo. Wixii khasaaro ah ee ka dhasha adeegsiga xogta, talo ama fikradaha ay bixiyaan ama ku matalayaan comme-un-pro.fr ee loo maro degelkan, comme-un-pro.fr wax mas'uuliyad ah ma saarin.
Isticmaalka websaydhka iyo dhammaan waxyaabaha uu ka kooban yahay (oo ay ku jiraan golayaasha) ayaa ku xidhan shuruudaha isticmaalka. Isticmaalka kaliya ee websaydhkani wuxuu muujinayaa aqoonta iyo aqbalaadda shuruudaha isticmaalka.
Jawaabaha iyo codsiyada macluumaadka shakhsi ahaaneed ee lagu soo gudbiyo emayl ama adeegsiga foomka websaydhka waxaa loola dhaqmi doonaa si la mid ah waraaqaha. Tan macnaheedu waxa weeye waxaad naga filan kartaa jawaab bil gudaheed uguyaraan. Haddii ay dhacdo codsiyo adag, waxaan kugula soo socodsiin doonaa hal bil gudaheed haddii aan u baahanahay ugu badnaan 3 bilood.
Xog kasta oo shaqsiyeed oo aad na siiso iyada oo qayb ka ah jawaabtaada ama codsi macluumaad waxaa kaliya loo isticmaali doonaa iyadoo la raacayo bayaankayaga gaarka ah.
comme-un-pro.fr wuxuu hoos u dhigayaa dhammaan mas'uuliyadda waxyaabaha ka kooban websaydhyada ama ka soo qaadashada cinwaan sare ama tixraac kale. Alaabooyinka ama adeegyada ay bixiyaan dhinacyada saddexaad waxay ku xiran yihiin shuruudaha iyo xaaladaha ku habboon ee dhinacyada saddexaad.
Dhammaan xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee ku jira waxa ku jira degelkan waxaa iska leh komme-un-pro.fr.
Koobinta, qeybinta iyo adeegsiga kale ee dukumiintiyadaan waa la mamnuucay iyada oo aan la haysan oggolaansho qoraal ah comme-un-pro.fr, marka laga reebo iyo illaa iyo inta ay ku qeexeen xeerarka qasabka ah (sida xaqa in la sheego), marka laga reebo tilmaam lid ku ah waxyaabaha ku jira.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama dhibaatooyin ah marin u helka goobta, fadlan haka waaban inaad nala soo xiriirto.